कोरोना प्रकोपमा नोबेल अस्पतालको लूट, भर्ना नलिएपछि महिलाले गरिन् देहत्याग
नेपाली पब्लिक आइतबार, कात्तिक २३, २०७७
नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरमा उपचारका लागि पुगेका बिरामीहरू अस्पतालको गेटबाटै फर्किने गरेका छन्। नोबेल अस्पतालले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बिरामीलाई भर्ना नगरी गेटबाटै फिर्ता गरिरहेको छ।
बिरामीको भर्ना गरेपछि पैसा जुटाएर आउने बताउँदा पनि नोबेल अस्पतालले भर्ना नलिई बिरामीलाई मर्न बाध्य बनाएको हो। यति हुँदासम्म पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले नोबेल अस्पताललाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा नल्याएको गुनासो पीडितले गरेका छन्।
मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–१० की ४० वर्षीय नरमाया मगरलाई उनका आफन्तले उपचार गराउनका लागि नोबेल अस्पताल पुर्‍याएका थिए। तर, १८ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने नोबेल अस्पतालको स्वघोषित नियमले उनको ज्यान गएको हो।
मगरलाई कात्तिक ९ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो। नोबेल अस्पताल प्रशासनले मगरको उपचारमा दैनिक १८ हजार रुपैयाँ लाग्ने र त्यो रकम अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने बताएको थियो।
‘जति बिन्ती गर्दा पनि भर्ना गर्न मानेन, त्यसैले घर फर्किएपछि पीडा सहन नसकेर उनले देहत्याग गरिन्,’ मृतक मगरका एक आफन्तले भने, ‘कोरोना प्रकोपमा उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आयो।’
मगरका पति टेकबहादुर मगरले उनको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पनि पुगेका थिए। तर, सरकारी अस्पताल बेड नभएको जानकारी पाएपछि उनी पत्नीलाई लिएर नोबेल अस्पताल पुगेका थिए।
घर फर्किएपछि कात्तिक १० गते कोरोना संक्रमित मगरले प्राण त्यागिन्। एक छिमेकीका अनुसार मृतक मगर मिर्गौलारोगी थिइन्। असारदेखि उनको मिर्गौलाको डाइलसिस गरिँदै आएको थियो।
कात्तिक ९ गते विहान करिब ३ बजे नोबेल अस्पतालमा उनको डाइलसिस गरिएको थियो। मिर्गौला डाइलसिस गरेकै दिन कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो।
कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट आएपछि नोबेल अस्पतालमा भर्ना गर्नका लागि परिवारका सदस्यले प्रयास गरेका थिए। तर, पत्नीको उपचारका लागि पैसा जुटाउन नसक्ने भएपछि मगरले उनलाई घर ल्याएका थिए।
आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका मगरलाई दशैंको टीकाकै दिन सही नसक्नुको पीडा आइपर्‍यो। श्रीमती मृत भेटिएपछि उनी विचलित भए। तर, उनको पीडा न सरकारले सुन्छ, न त लूट मच्चाउने अस्पतालले।
नोबेल अस्पतालले यसअघि पनि आर्थिक विषयमै दुर्नाम हुँदै आएको छ। पैसा नभएकै कारण बिरामीले ज्यान फाल्नु परेको घटना सार्वजनिक भएपछि पूर्वका बुद्धिजीवीले नोबेल अस्पतालको लूट र द्रव्यमोहको निन्दा गरेका छन्।
पैसा नभएका कारण फर्काइएको होइन: नोबेल अस्पताल
यसैबीच, नोबेल अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई पैसा नभएकै कारण घर पठाउने आफ्नो कार्यको बचाउ गरेको छ। अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले पैसा नभएकै कारण घर फर्काउने कार्य नगरिएको जिकिर गर्दै अहिले पनि सबैको उपचार भइरहेको बताए।
दाहालले अस्पतालले बिरामीलाई घर पठायो भन्ने आरोप गलत भएको दावी पनि गरे। ‘पैसा नभएर कसैलाई घर पठाएका छैनौं,’ उनले भने।
तर, मगरको उपचार चाहिँ किन नगर्नु भएको? महामारीमा मानवीय मूल्यको ख्याल गर्नुपर्दैन? अस्पतालको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ होला भन्ने प्रश्न गरेपछि दाहालले फोन काटे।
नोबेल अस्पतालमा अहिले पनि आर्थिक पहुँच हुनेले मात्रै उपचार पाउने गर्छन्। कतिपय विपन्न नागरिकहरू अस्पतालको गेटबाटै फर्काइएका छन्।
‘नोबेलको लूट निरन्तर चलिरहेको छ, तर सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन कुनै कारबाही गरेको छैन?,’ विराटनगर–४ का मनोज भट्टराईले प्रश्न गर्दै भने, ‘कि सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग सेटिङ भए हामीले भन्नु केही छैन, नत्र यो अस्पताललाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ।’
#उपचार #विराटनगर #नोबेल_शिक्षण_अस्पताल #मोरङ #कोरोना_संक्रमित #अग्रिम_भुक्तानी
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २३, २०७७ २३:२२
मंगलबार, वैशाख ७, २०७८ १४:०१ एमालेले २७ सांसद्लाई स्पष्टीकरण सोध्दै
मंगलबार, वैशाख ७, २०७८ १३:४१ कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको म्याद पुनः थप
मंगलबार, वैशाख ७, २०७८ १३:११ भारत भ्रमणबाट फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण